फुट्दै नेकपा माओवादी केन्द्र ! | जनधाराडेली
फुट्दै नेकपा माओवादी केन्द्र !
१७ फाल्गुन २०७८, मंगलवार १७:२३ जनधाराLeaveaComment
काठमाडौं, फागुन १७ ।
एमसीसीको विषयलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्र फुटको कगारमा पुगेको छ । अमेरिकी सहयोग एमसीसी सम्झौता संसद्बारा अनुमोदन भएको विषयलाई लिएर माओवादीभित्र दुई लाइन संघर्ष चर्किएको छ ।
व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गर्ने पार्टी लाइनको विपक्षमा रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठसहित पूर्वएकताकेन्द्र समूहका नेताहरूले माओवादी पार्टीबाट विद्रोह गर्न सक्ने सम्भावना बढेपछि मंगलवार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हात्तिवनस्थित नारायणकाजीको निवासमा पुगेका छन् ।
विचार मिल्दा र मन लाग्दासम्म एउटै पार्टीमा बस्ने हो भन्दै प्रचण्डले एकै ठाउँमा रहन नसक्नेहरु अलग हुन सक्ने भाव प्रकट थिए । तर, पूर्वएकताकेन्द्रका साथीहरूले यसलाई ‘छाडेर गए हुन्छ’ भनेको अर्थमा बुझेका छन् ।
एमसीसी पारित हुँदा पार्टीभित्र र संसद्‍मा समेत गिरिराजमणि पोखरेल, अञ्जना बिसंखे लगायतका नेताहरूले असहमति जनाएका थिए । नारायणकाजी श्रेष्ठ, लीलामणि पोखरेल लगायतले पार्टीको बैठकमा असहमति जनाएका थिए । पूर्वएकताकेन्द्रका नेताहरूले जस्तै कृष्णबहादुर महरा, राम कार्की लगायतले पनि एमसीसी अनुमोदनको विरोध गरेका थिए । एमसीसीको विरोध गर्दै आएका देव गुरुङले भने पार्टी लाइनलाई समर्थन गरेको सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
युवा नेता लेखनाथ न्यौपानेले एमसीसी पारित गर्ने निर्णय अवैधानिक भएको र प्रचण्डको मात्रै निर्णय भएको बताएका छन् । अर्का केन्द्रीय सदस्य जीवन गौतमले पनि एमसीसी पारित गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । पूर्वएकताकेन्द्रका नेताहरूले माओवादीबाट विद्रोह गरेर अलग्गै पार्टी बनाउन श्रेष्ठमाथि दबाव दिइरहेको स्रोतले बतायो ।
यही असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्न र नारायणकाजीलाई फकाउन प्रचण्ड मंगलबार दिउँसो हात्तीवन गएको एक नेताले बताए ।
प्रचण्ड निकट स्रोतले भने फागुन २० गतेको बैठकको तयारीका क्रममा प्रचण्ड र नारायणकाजी बीच भेटघाट भएको भन्दै यसलाई सामान्यरुपमा लिन आग्रह गर्‍यो ।